Hal qodob oo dhabar jab ku ah dowladda dhexe oo ay beesha caalamka iyo Deni isku af garteen. – XAMAR POST
Hal qodob oo dhabar jab ku ah dowladda dhexe oo ay beesha caalamka iyo Deni isku af garteen.
Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa shalay kulan la qaatay xubnaha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya, ayaga oo ka wada-hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale kulanka diiradda lagu saaray doorashadda Soomaaliya, islamarkaana in la adkeeyo in xilligeeda ay ku dhacdo, taasi oo beesha caalamka ay sheegtay inay muhiim tahay.Puntland ayaa horey u qaadacday sharciga doorashooyinka ee la ansixiyey, waxayna sheegtay inaysan ka qeyb-gali doonin doorashada haddii aan laga talo-gelin.
Sababta ka dambeysa magacabista Gudoomiyaha cusub ee Maxkamadda G/Banaadir?